Ogaden News Agency (ONA) – Midowga Yurub (EU) oo Kahadlay Xaalada Murugsan ee Itoobiya.
Midowga Yurub (EU) oo Kahadlay Xaalada Murugsan ee Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ February 20, 2018
Hadal qoraal ah oo kasoo baxay Midowga Yurub EU ayaa siwayn loogu cambaareeyay xukunka dag daga ah ee lagu soo rogay wadanka Gumaysiga Itoobiya, waxaana qoraalka Midowga Yurub EU kasoo baxay lagu sheegay in dadka oo lacabudhiyaa ay cawaaqib xun keeni doonto.
Hadalka kasoo yeedhay Midowga Yurub EU ayaa lagu sheegay in loobaahan yahay in wadanka dowlad wadaag ah oo dadku uwada dhan yihiin kuna qanacsan yihiin laga dhiso wadanka uu qalalaasuhu hadheeyay ee gumaysiga Itoobiya.
Midowga Yurub EU ayaa sidoo kale xukuumada gilgilanaysa ee wayaanaha kula taliyay in ay qabtaan shirwayne nabadeed oo dadka oo dhan loogu baaqo in ay kasoo qayb galaan isla markaana lagu yagleelo dowlad wadaag ah oo qoomiyaduhu ay kawada muuqdaan.
Labo bari kahor unbay ahayd markii dowladu Maraykanku ay soosaartay baaq lamid ah midka Midowga Yurub, waxaana isasoo taraya dowladaha iyo ururada katalo dhiibanaya xaalada murugsan ee Itoobiya.
Dhinaca kale warbixin ay soosaartay Hay’ada UNICIFE ayaa lagu sheegay in wadamada bariga Africa ay kajirto abaar baaxad leh oo dad iyo diinyaba ah, waxayna hay’adu farta kufiiqday wadanka Gumaysiga Itoobiya oo macaluul xoogan ay kajirto.